घनले हानेर श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ :बोरामा हालेर फालिएको अवस्थामा शव फेला !! | सुदुरपश्चिम खबर
घनले हानेर श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ :बोरामा हालेर फालिएको अवस्थामा शव फेला !!
काठमाडौं । बल्खुमा घन प्रहार गरेर ३२ वर्षीया सन्तोषी श्रेष्ठको हत्या भएको छ । हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उनका पति सन्तोष सापकोटालाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख अशोक सिंहका अनुसार घन प्रहार गरेर हत्या गरेको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको हो । ‘मंगलबार साँझ बल्खुबाट उनलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान थालेका छौं’, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।